Six Companies to Bid for Yangon’s Smart Parking Projects | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalSix Companies to Bid for Yangon’s Smart Parking Projects
Six companies have passed preliminary selection for the Yangon Regional Government’s smart car parking projects in six downtown townships. The winner will be chosen throughabidding process and the due date for bid submission is November 29, according to U Min Khaing, who heads the Yangon City Development Committee’s Engineering Department (Roads and Bridges).
The smart parkings will be built in Latah, Pabendan, Lamadaw, Kyauktada, Pazundaung and Botahtaung townships. Parking fees have been set at K500, K 300 and K 200 per hour for different types of vehicles.
“We will invite tender transparency and choose the most suitable and capable company,” said Yangon mayor U Maung Maung Soe.
The YCDC plans to see the smart parking projects through to completion, said committee member Daw May May Thwe.
Local and foreign companies were invited to submit Expressions of Interest (EOIs) for the projects in April, and 23 EOIs were received by the Engineering Department.
The number of vehicles in Myanmar has surged to 1 million and 70 percent of them are in Yangon,acity with 2.7 million commuters.
ရန်ကုန်မြို့တွင်း (၆) မြို့နယ်တွင် စမတ် ကားပါကင်တည်ဆောက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှု ဖော်ပြခြင်း အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းသူ ၂၃ ဦးရှိပြီး ယင်းထဲမှ (၆) ဦးကို ပဏာမရွေးချယ် ထားပြီး အပြီးသတ်ရွေးချယ်ရန် လုပ်ကိုင် ခွင့်ရမည့်တင်ဒါကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အင်ဂျင် နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတားဌာန) ဌာနမှူး ဦးမင်းခိုင်က ပြောသည်။
လသာ၊ ပန်းပဲတန်း၊ လမ်းမတော်၊ ကျောက် တံတား၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင် ခြောက် မြို့နယ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ှSmart Car Parking တည်ဆောက်ပြီးပါက ကားပါကင်ကြေးကို အနီ၊ အစိမ်း၊ အဝါဟု အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲ၍ ၁ နာရီလျှင် ကျပ် ၅ဝဝ ၊ ကျပ် ၃ဝဝ နှင့် ကျပ် ၂ဝဝ နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ကားပါကင်တင်ဒါခေါ်ရင်တော့ ပွင့်လင်း မြင်သာတဲ့ တင်ဒါခေါ်ပါမယ်။ လုပ်ချင်တဲ့ လူနဲ့ဆိုတာထက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့သူ လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ လုပ်သွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်”ဟု ဦးမောင်မောင်စိုးက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် Smart Car Parking
တည် ဆောက်ခြင်းကို အမြန်ဆုံးပြီးစီးရန် တည် ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်စည် ပင်သာယာရေးကော်မတီ ကော်မတီဝင် ဒေါ်မေမေသွယ်က ဖြည့်စွတ်ပြောကြား သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီမှ မြို့တွင်း (၆) မြို့နယ်ရှိ ယာဉ်ရပ်နား ရန်ကန့်သတ်ဇုန်များတွင် Smart Car Parking
လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ များ(သို့) ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများကို စိတ်ဝင်စားမှု ဖော်ပြခြင်း အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် ဧပြီလဆန်းတွင် စတင်ခေါ်ယူခဲ့သည်။
ယင်းသု့ိ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် ဧပြီ အတွင်းက စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင် နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား) ထံသို့ လျှောက် လွှာများပေးပို့ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မော်တော်ယာဉ် အစီးရေ ၁ဝ သိန်းကျော် တိုးတက်လာပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုနေ ကာ မြို့တွင်းခရီးသွား ၂ ဒသမ ၇ သန်းခန့် နေ့စဉ်သွားလာနေကြောင်း သိရသည်။
Previous articleHuawei Launches Mate 30 Pro
Next articleYangon Land Confiscations for Public Projects Must Comply with Law